Etu esi edozi njehie Google Play Store akwụsịla | Gam akporosis
Playlọ Ahịa Google bụ ụlọ ahịa ngwa ngwa maka ekwentị gam akporo, ọ bụ ezie na anyị nwere oge ọ bụla ọzọ uzo ozo ya. Ka ọ dị ugbu a, ọ nwere ike ime na anyị zutere nsogbu na arụmọrụ nke ụlọ ahịa ahụ. Otu ihe karịrị otu onye ọrụ zutere bụ ozi na-ekwu na ụlọ ahịa ahụ akwụsịla. Kedu ihe ị ga-eme n'okwu a?
Ọ bụrụ na ị nweta ozi na ka Google Play Store kwusiri, ozi a nwere ike inwe mmalite dị iche iche. N'ihi nke a, anyị buru ụzọ kwuo ihe kpatara ozi a wee hụ ụzọ ụfọdụ iji dozie nsogbu a na gam akporo.
Mmalite nke njehie a na-abụkarị otu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge niile. O nwere ike ị gaghị emelite Storelọ Ahịa Play ya kacha-adịbeghị anya mbipute, nke nwere ike na-akpata nsogbu na ekwentị gị. Ebe ọzọ na - esite na nke a bụ na enwere ọdịda na oghere ngwa ahụ. Ma ọ bụ, ụfọdụ, sava Google bụ isi mmalite nke nsogbu a. Also nwekwara nhọrọ nke iwepụ Storelọ Ahịa Play ma wụnye.
N'agbanyeghị mmalite ya, lee ụzọ ndị ga - ekwe omume nsogbu a na-akpasu iwe.
1 Melite Playlọ Ahịa Google
2 Kachapụ oghere
3 Kọwaa ebe nchekwa ọrụ Google
Melite Playlọ Ahịa Google
Ihe mbu nwere ike ibute nsogbu a bu na ị na-eji ụdị ochie nke Storelọ Ahịa Play na ekwentị gam akporo gị. Nọmalị ọ naghị abụkarị ihe na - eweta nsogbu arụmọrụ, mana ọ nwere ike ịbụ ihe kpatara ya n'echiche a. Anyị egosiworị gị ụzọ anyị nwere imelite ụlọ ahịa. Ya mere usoro a ekwesịghị ịbụ ihe omimi nye gị.
Anyị na-abanye na Storelọ Ahịa Play na ekwentị gam akporo anyị. Ọzọ, anyị na-egosipụta menu n'akụkụ aka ekpe nke ihuenyo ahụ. Anyị na-enweta ọtụtụ nhọrọ na ihuenyo, otu n'ime ya bụ ntọala. Ozugbo n'ime ntọala ahụ, anyị na-aga na ngalaba nke na-egosi ụdị nke anyị etinyela.
Ọ bụrụ na enwere mmelite ọ bụla, a ga-agwa anyị na ihuenyo. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ ga-egosi na anyị na-eji kacha ọhụrụ mbipute nke ya. Mgbe emesịrị, ozi dị na ajụjụ nwere ike ịkwụsị ịnweta nke kwuru na ọ kwụsịrị.
A na-enwekarị ọdịda, nke na-eme na ngwa ndị ọzọ na gam akporo, bụ na enwere nsogbu na ebe nchekwa. N'ihi nke a, anyị na-ahụ nrụrụ aka na Storelọ Ahịa Play. Ọ bụ ya mere ihe ngwọta dị na nke a bụ iji kpochapụ oghere ngwa ahụ. Ọ bụ otu usoro ahụ anyị na-eme iji kpochapụ oghere nke ngwa ọ bụla, yana anyị egosila gị n'oge ụfọdụ tupu mgbe ahụ.
Ya mere, anyị kwesịrị gaa na ntọala nke anyị gam akporo ekwentị. Anyị na-abanyezi ngalaba ngwa ahụ dị na ya. Anyị ga-enweta ndepụta nke ngwa ndị anyị rụnyere na ekwentị. Site na ndepụta ahụ na-apụta, anyị ga-achọ Google Play Services na ya. Anyị na-abanye na profaịlụ gị.
N'ebe ahụ anyị na-ahụ ike ikpochapụ oghere. Ya mere, anyị na-eme nke a ma na-ekpocha oghere, ọrụ oflọ Ahịa Play Store ga-alaghachi na nkịtị. Ya mere ozi na-ekwu na Storelọ Ahịa Play akwụsịla ga-akwụsị ịpụta na ihuenyo.
Kọwaa ebe nchekwa ọrụ Google
Nhọrọ nke atọ yiri nke gara aga, naanị na ihe a Anyị ga-eme doro anya oghere Google Services Framework. O nwere ike ịnwe mmetụta achọrọ na ụfọdụ, ebe ụzọ ndị dị n'elu enyerebeghị aka n'ịdozi ahụhụ a na ngwa ngwa.
Ya mere, tinye ntọala gam akporo na ngwa ngwa. Lee n'ime ndepụta maka ngwa ahụ akpọrọ Google Services Framework. Tinye ya na mgbe ahụ anyị ga-ekpochapụ oghere gị kpam kpam. Mgbe ahụ mgbe anyị laghachiri na Storelọ Ahịa Play, ozi ga-efu efu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ịnweta ozi Google Play Store akwụsịla na gam akporo